Soo dejisan KeePass 2.30 Professional iyo Portable... – Vessoft
Soo dejisan KeePass
KeePass – software awood leh in uu kaydiyo sirta ah, xisaab iyo xog kala duwan ee foomka xog-xajin. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan sirta badan oo ku kaydi database a in uu xiran yahay oo ay ugu waaweyn ee faylka gaarka ah ee muhiimka ah ama khaas ah. KeePass taageertaa algorithms ugu ammaanka badan daafaco si aad encipher ee sirta ah ee database-lahaansho. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka daabacan oo aanay database qaabab file kala duwan. KeePass sidoo kale waxaa ku jira tiro badan oo ah qalab reserved matoor password, baadi iyo kala soocida ay kooxo kala duwan.
Taageerida program ugu ammaanka badan
Waxaa la dhisay-in matoor password
Beddelaan database qaabab kala duwan
Comments on KeePass:
KeePass Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Imagen 3.1.2